အဂျိုင်း လ်, နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း. အဂျိုင်း နည်း
ⓘ အဂျိုင်း လ်, နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း. အဂျိုင်း နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲရ် တစ်ခုကို ဖန်တီးရာတွင် ချဉ်းကပ် အဖြေရှာပုံ နည်းလမ်း ..
ⓘ အဂျိုင်း(လ်) နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း
အဂျိုင်း နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲရ် တစ်ခုကို ဖန်တီးရာတွင် ချဉ်းကပ် အဖြေရှာပုံ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနည်းလမ်းတွင် ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူနိုင်၍ ဆော့ဖ်ဝဲရ်ကဏ္ဍစုံတွင် ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သည့် အဖွဲ့များ နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ်ကို အသုံးပြုမည့်သူများ အတူတကွ ညှိနှိုင်း အားထုတ်လုပ်ဆောင်၍ ဆော့ဖ်ဝဲရ် အတွက် လိုအပ်ချက်များ နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ်အဖြေများကို အဆင့်ဆင့် ဖော်ထုတ် ရယူသည်။အဂျိုင်း နည်းတွင် ပြောင်းလဲရန် လွယ်ကူသောစီစဉ်မှု၊ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ ဖန်တီးခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲရ် တစ်ခုကို စောစီးစွာ ပေးအပ်ခြင်း နှင့် အစဉ်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို အလေးထား၊ ဦးစားပေး၍ အပြောင်းအလဲ ကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်၍ ပြောင်းလဲရန် ပျော့ပြောင်း လွယ်ကူခြင်းကို အားပေးသည်။
အင်္ဂလိပ်:aအသေးဖြင့် အဂျိုင်းလ် အင်္ဂလိပ်: agile ဟုသုံးလျှင် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်းတွင် ပြောင်းလဲရန် လွယ်ကူခြင်းနှင့် အပြောင်းအလဲ ကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းတို့ကို ယေဘုယျသဘောဖြင့် ရည်ညွန်းသည်။ အင်္ဂလိပ်: Aအကြီးဖြင့် အဂျိုင်းလ် အင်္ဂလိပ်: Agile ဟုသုံးလျှင် အဂျိုင်းလ် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးမှု ကြေညာစာတန်း နှင့်အညီ သို့မဟုတ် အနည်းစပ်ဆုံး ကိုက်ညီသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ စကရမ်း နှင့် ကန်ဘမ် တို့အပါအဝင် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း နည်းလမ်းဘောင် အများအပြားမှာ ဤ ကြေညာစာတန်းမှ ပေါ်ထွန်းလာသော တန်ဖိုးများနှင့် နိယာမများ ကို အခြေခံကြသည်။
အဂျိုင်းလ် နည်းလမ်း များ နှင့် အဂျိုင်းလ် တန်ဖိုးများ ကို လိုက်နာခြင်း ကြောင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ပညာရှင်များ နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် အသင်း၊ အဖွဲ့ များ၏ အပြောင်းအလဲကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်မှုများတိုးတက်၍ အကျိုးများကြောင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောဆိုရေးသားကြသည်။ သို့သော် အချို့ သုတေသနများတွင် အဂျိုင်းလ်နည်းကြောင့် အကျိုးများကြောင်းကို သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေအထောက်အထား မရှိဟု တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အဆင့်ဆင့်နှင့် အနည်းငယ်မျှသာ ပြောင်းလဲမှုပြုသော ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးခြင်း အင်္ဂလိပ်: Iterative and incremental development နည်းလမ်းများကို ၁၉၅၇ခုနှစ် ကတဲက စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ စီမံကိန်းခံ့ခွဲမှု အင်္ဂလိပ်: Evolutionary project management နှင့် ပြောင်းလဲလွယ်မှုကို အထူးပြုသော ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း အင်္ဂလိပ်: Adaptive software development နည်းတို့မှာ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။
ဝေဖန်သူများက အလွန် စည်းမျဉ်းများသော၊ စီမံမှုလွန်ကဲ၍ အသေးစိတ်လွန်းသည် ဟု ဖော်ပြခံရသော နှေးကွေး လေးလံသည့် ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးခြင်း နည်းလမ်းများကို တုံ့ပြန်ချက်အဖြစ် သွက်လက်ပေါ့ပါးသော ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးခြင်း နည်းလမ်းများ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် ပြောင်းလဲပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ပေါ်ထွန်းလာသော နည်းလမ်းများမှာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဆော့ဝဲရ် အမြန် ဖန်တီးခြင်းနည်းလမ်း အင်္ဂလိပ်: Rapid Application Development၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ပေါင်းစည်း နည်းလမ်း အင်္ဂလိပ်: Unified process နှင့် ပြောင်းလဲသော စနစ်များကို ဖန်တီးခြင်းနည်းလမ်း အင်္ဂလိပ်: Dynamic systems development method၊ ၁၉၉၅ တွင် စကရမ်း အင်္ဂလိပ်: Scrum ၊ ၁၉၉၆ တွင် ခရစ္စတယ် ကလီးယား အင်္ဂလိပ်: Crystal clear နှင့် အစွမ်းရောက် ဆော့ဝဲရ်ဖန်တီးခြင်းနည်းလမ်း အင်္ဂလိပ်: Extreme programming နှင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စွမ်းဆောင်နိုင်ချက် တွန်းအားပေး ဖန်တီးခြင်းနည်းလမ်း အင်္ဂလိပ်: Feature-driven development တို့ ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းလမ်းများ သည် အဂျိုင်းလ် ကြေညာစာတန်း မထုတ်ပြန်မီ အချိန်က စတင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ထိုနည်းလမ်းများအားလုံးကို အဂျိုင်းလ် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးနည်းလမ်းများ ဟု ရည်ညွန်းလေ့ရှိသည်။ ထိုနည်းလမ်းများ ပေါ်ထွန်းလာသည့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ လေကြောင်း နှင့် အာကာသကဏ္ဍ များ တွင်လည်း အလားတူ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည်။
၂၀ဝ၁ ခုနှစ်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးသူ ၁၇ ယောက် သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ယူတားပြည်နယ်၊ စနိုးဘာဒ် အင်္ဂလိပ်: Snowbird ရှိ အပန်းဖြေဟိုတယ် တစ်ခုတွင် သွက်လက်ပေါ့ပါးသော ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးခြင်း နည်းလမ်းများ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးရန် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသူများတွင် ကင့် ဘက်ခ် အင်္ဂလိပ်: Kent Beck ၊ ဝါ့ဒ် ကန်နင်ဟမ် အင်္ဂလိပ်: Ward Cunningham ၊ ဒေ့ဖ် သောမတ်စ် အင်္ဂလိပ်: Dave Thomas ၊ ဂျက်ဖ် ဆတ်သာလန့်ဒ် အင်္ဂလိပ်: Jeff Sutherland ၊ ကန် ရွှာဘား အင်္ဂလိပ်: Ken Schwaber ၊ ဂျင်မ် ဟိုင်းစမစ်သ် အင်္ဂလိပ်: Jim Highsmith ၊ အလစ်စ်တဲရ် ကော့ခ်ဘန်း အင်္ဂလိပ်: Alistair Cockburn နှင့် ရောဘတ် စီ မာတင် အင်္ဂလိပ်: Robert C. Martin တို့ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူများအားလုံး စုပေါင်း၍ အဂျိုင်းလ် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးမှု ကြေညာစာတန်း အင်္ဂလိပ်: Manifesto for Agile Software Development ကိုရေးသားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
၂၀ဝ၅ ခုနှစ်တွင် ကော့ခ်ဘန်း နှင့် ဟိုင်းစမစ်သ်တို့ ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့မှ ဆော့ဖ်ဝဲရ်စီမံကိန်း ခန့်ခွဲမှုကို ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးခြင်း နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်ရန် အတွက် စီမံကိန်း ခန့်ခွဲမှု နိယာမများ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် စီမံကိန်း ခန့်ခွဲမှု လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတန်းအင်္ဂလိပ်: PM Declaration of Interdependence ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။
၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် မာတင် ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့မှ ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးခြင်း နိယာမများကို တိုးချဲ့၍ အဂျိုင်းလ် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်းကို ပညာရှင်ကျင့်ဝတ် နှင့် သမားစဉ်အတိုင်း လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်ရန်အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲရ် လက်မှုပညာ ကြေညာစာတန်း အင်္ဂလိပ်: Software Craftsmanship Manifesto ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အဂျိုင်းလ်မဟာမိတ် အင်္ဂလိပ်: Agile Alliance မှ ပေါ့ပါး သွက်လက်သော လက်တွေ့နည်းလမ်းများ၊ ဝေါဟာရများ၊ အခြေခံများ နှင့် ထိုအချက်များကို ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ပေါ့ပါးသွက်လက်နည်း ကျင့်သုံးသူများ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်တကွ အတွေ့အကြုံလမ်းညွှန်များကို အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲထွက်ပေါ်လာမည့် ပွင့်လင်းရင်းမြစ် အင်္ဂလိပ်: Open-source လက်စွဲအဖြစ် အဂျိုင်းလ် လက်တွေ့လမ်းညွှန် အင်္ဂလိပ်: Guide to Agile Practices ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ထိုလမ်းညွှန်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အဂျိုင်းလ် ဝေါဟာရများ အင်္ဂလိပ်: Agile Glossaryဟုအမည် ပြောင်းခဲ့သည်။
2.1. အဂျိုင်းလ် ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးမှု အတွက် ကြေညာစာတန်း အဂျိုင်းလ် ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးမှု တန်ဖိုးထားချက်များ
အဂျိုင်းလ် ကြေညာစာတန်းကို ထောက်ခံ လက်မှတ်ရေးထိုးသူ တစ်ဆယ့်ခုနှစ်ဦးသည် သူတို့၏ ဆော့ဖ်ဝဲရ်ကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်း နှင့် အခြားသူများအား ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်းတွင် ကူညီအားပေးခဲ့သော စုပေါင်း အတွေ့အကြုံများ ကို အခြေခံ၍ သူတို့၏ တန်ဖိုးထားပုံကို -
အလုပ်လုပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲရ် ကို စာရွက်စာတမ်း ပြည့်စုံခြင်းထက် ပို၍
2.2. အဂျိုင်းလ် ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးမှု အတွက် ကြေညာစာတန်း အဂျိုင်းလ် ဆော့ဖ်ဝဲရ်ဖန်တီးမှု ဥပဒေသများ
အဂျိုင်းလ်ကြေညာစာတန်းသည် အဂျိုင်းလ်ဥပဒေသ တစ်ဆယ့်နှစ်ချက် ပေါ်တွင် အခြေခံသည်။
Wikipedia: အဂျိုင်း(လ်) နည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲရ် ဖန်တီးခြင်း